Tirada dhimashada ee dhul gariirkii Talyaaniga oo korortay - BBC News Somali
Tirada dhimashada ee dhul gariirkii Talyaaniga oo korortay
Image caption 247 qof ayaa la og yahay inay dhulgariirka ku dhinteen
Tirada dadkii ku dhintay dhul gariirkii ka dhacay bartamaha Talyaaniga ayaa la ogyahay inay subaxnimada Arbacada marayso 247. Dhul gariirka ayaa burburiyey seddex magaalo oo kala ah Amatrice, Accumoli iyo Pescara del Tronto.
Kooxaha samata bixinta ayaa tan iyo xalay baadi goob ugu jiray dad masiibada ka badbaaday, waxaana mar hawshooda yara hakiyey dhul ruxan xoog leh, oo kaga gariiriyey dhismeyaal dhaawacyo qabay. Dhulkaas mashaqadu ka dhacday oo buuraley ah ayaa ku dhereran seddex gobol oo kala ah Umbria, Lazio iyo Marche.
Ubucda dhul gariirka ayaa ahayd meel u dhow Norcia oo 170 waqooyiga galbeed ka xigta magaalada caasimadda ee Roma. Teendhooyin ayaa la taagay si meelo ay galaan loogu sameeyo dadka hoy la'aantu ku dhacday.